Ra'iisul Wasaare Boris Johnson oo ku sugan xaalad adag
Ra’iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa weli ku sugan xaalad adag, isaga oo qeybta daryeelka deg degga ee isbitalka kula dagaalamaya cudurka Coronavirus, oo haleelay 10 maalmood ka hor.
Johnson ayaa qeybta daryeelka deg degga ee isbitalka la dhigay Axaddii, kadib markii 10 maalmood oo xiriir ah lagu arkayey astaamaha cudurka Coronavirus, sida qandho xooggan.
“Iminka aynu hadleyno, ra’iisul wasaaraha wuxuu ku sugan yahay xaalad deg deg ah, waxaana la-tacaalaya dhaqaatiirta, isaga oo daryeelka ugu wanaagsan ka helaya koox ku sugan isbitalka St Thomas. Rajadeena iyo ducadeena ayaa la jirta isaga iyo qoyskiisa,” waxaa sidaas yiri Michael Gove, oo ah wasiirka xafiiska golaha wasiirada, oo la hadlay taleefishinka BBC.
“Waxaan dhammaanteyn rajeeneynaa in caafimaadkiisa dib loogu soo celiyo sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan, taas waa waxa aan hadda ka fakareyno,” ayuu yiir.